सशस्त्रमा दुई एआईजीको म्याद थपिएला ? म्याद थप्दा र नथप्दा के हुन्छ ? : RajdhaniDaily.com - सशस्त्रमा दुई एआईजीको म्याद थपिएला ? म्याद थप्दा र नथप्दा के हुन्छ ?
महेश्वर गौतम - April 14, 2021 0
Home Editor-Picks सशस्त्रमा दुई एआईजीको म्याद थपिएला ? म्याद थप्दा र नथप्दा के हुन्छ...
सशस्त्रमा दुई एआईजीको म्याद थपिएला ? म्याद थप्दा र नथप्दा के हुन्छ ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको भावी नेतृत्वलाई लिएर अहिलेदेखि नै चर्काे लविङ सुरु भएको छ । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहे पनि आगामी वैशाखको तेस्रो साता दुई जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को चार बर्से कार्यकाल सकिने भएकाले अहिलेदेखि नै लविङ सुरु भएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल एआईजी छन् । दुबै जना आईजीपी खनालका व्याची हुन् । एक वर्ष म्याद थप भएको अवस्थामा खनालपछि केसी आईजीपी बन्ने र हाल सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रहेका खड्गबहादुर राई र मन्दिप श्रेष्ठ डीआईजीबाटै अवकाश पाउने भएकाले पनि अहिलेदेखि नै लविङले तिब्रता पाएको हो ।
केसी र पौडेलको एक वर्ष म्याद थप भएको अवस्थामा डीआईजीद्वय राई र श्रेष्ठले आगामी २६ माघमा अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । म्याद थप नभएको अवस्थामा राईले खनालपछि सशस्त्रको नेतृत्व लिनेछन् ।
स्रोतका अनुसार, एआईजीद्वय केसी र पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी फाइल अघि नबढाउन सशस्त्र नेतृत्वमाथि चर्काे दबाब परेको छ । केसी र पौडेल आईजीपी खनालकै ब्याची भएकाले एक जनाको कार्यकाल सकेपछि सोही ब्याचका अर्का व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन नहुने भन्दै अन्य वरिष्ठ अधिकृतले पनि लविङ थालेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा पछिल्लो पटक २०७२ सालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली लागूू भएपछि अहिलेसम्म पनि विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत व्यक्तिको पदावधि थप गरिएको छैन । यद्यपि, प्रथम श्रेणी (डीआईजी) हुँदा सुरजकुमार श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरविन्द धितालको पदावधि थपिएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको पदावधि थप्दा अन्य अधिकृतहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने, नेतृत्वलाई काम गर्न अप्ठेरो हुने मत पनि सशस्त्रमा बलियो हुदै गएको छ ।
वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका एआईजी केसीमाथि हालका आईजीपी खनाललाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ । म्याद थप भएको अवस्थामा लामो समयसम्म संगठनको नेतृत्वमा रहन उनी अहिलेदेखि नै ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने खेलमा लाग्ने डर पनि सशस्त्रका वरिष्ठ अधिकृतहरुलाई छ ।
चर्काे लविङकै कारण सशस्त्र मुख्यालयले दुई जना एआईजीको एक वर्ष म्याद थपसम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयलाई पठाएको छैन । सशस्त्रका अधिकाँश वरिष्ठ अधिकृत दुबै जनाको म्यद थप्न नहुने पक्षमा छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि चार/चार वर्ष रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को खण्ड ६४ को नियम २ को उपनियम १ मा भने एआईजी र डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको समयमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आएको हो । नयाँ नियमावली आउनु अगाडि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि पाँच वर्ष रहेको थियो ।
तत्कालीन आईजीपी वन्तले एआईजी र डीआईजीलाई संगठन र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन, कार्यसम्पादन राम्रो र क्षमता भएकालाई अगाडि बढाउने उद्धेश्यले नियमावलीमा चार जोड एकको व्यवस्था गरेका थिए ।
यस्तो छ नेतृत्वको जोड घटाउ
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको चार बर्से कार्यकाल आगामी वर्षको २८ चैतमा सकिदै छ । हाल रहेका दुई जना एआईजीको कार्यकाल आगामी २० वैशाखसम्म रहेको छ । २० वैशाख अगाडि दुबै जना एआईजीको म्याद थप भए डीआईजी राई र श्रेष्ठ डीआईजीबाटै २६ माघमा घर जाने छन् ।
यदि दुबै एआईजीको म्याद थप नभएको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा राई पहिलो नम्बरको एआईजी बन्नेछन् र आईजीपी बन्न उनलाई बाटो खुल्ने छ ।
त्यसपछि खनालको अवकाशसँगै राई १० चैत २०७९ सम्म आईजीपी बन्नेछन् । उनी ११ चैत २०४९ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
राईसँगै मन्दिप श्रेष्ठ, प्रविणकुमार श्रेष्ठमध्ये एकजना एआईजी बन्ने छन् । मन्दिप र प्रविणमध्ये मन्दिप रासन घोटाला काण्डमा मुछिएको र उनको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेकाले प्रविण नै अगाडि आउने आँकलन गरिएको छ ।
(Visited 4,220 times,3visits today)
Via रोशन श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिने अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको २९.२२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । सरकारको विकास कार्य तीव्र गतिमा...
लोकसेवा आयोगका परीक्षामा सफल हुनका लागि लेख्ने तरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । परीक्षामा सशक्त लख्ने पूर्ण तयारी आवश्यक हुन्छ । आयोगका परीक्षामा सफल हुनको...
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग: चेल्सी र पिएसजी विजयी
लन्डन । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत क्वाटरफाइनल पहिलो लेगको खेलमा चेल्सी र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) विजयी भएका छन् । पोर्चुगलमा भएको खेलमा चेल्सीले...
महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल प्यानलको जित, औपचारिक घोषणा हुन बाँकी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल प्यानलको नेतृत्वको जित सुनिश्चित भएको छ । शनिबार केन्द्रको मत गणना सकिएको छ । नुवाकोटसहित ५ जिल्लाको...
पढाइ लेखाइको सुन्दर पक्ष
भनिन्छ, शिक्षा मानिसको तेस्रो आँखा हो । शिक्षाबिना मानिसले जीवनको पूर्ण उज्यालो देख्न सक्दैन । शिक्षाबिना जीवनको क्षितिज अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ । अहिलेको...
आधा शताब्दीकै अधिक वर्षा
पोखरा । पोखरामा सन् २०२० मा आधा शताब्दीयताकै अधिक वर्षा भएको छ । यो वर्षको सेप्टेम्बर अन्त्यसम्मको वर्षात् ५० वर्षयताकै अधिक वर्षा हो ।...
अमिलो पानी महोत्सव तथा डम्फू सेलो साँस्कृतिक कार्यक्रम
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा ‘अमिलो पानी महोत्सव तथा डम्फू सेलो साँस्कृतिक’ कार्यक्रम हुने भएको छ । साझा भोथाङ संस्थाले राजधानीमा पत्रकार...
प्रमुख Sushila Bishwokarma - November 30, 2020 0
भजनी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला तल्लो तहका नेता भने अझै पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान हुने आशामा देखिएका...
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या हालसम्म १४४ पुगेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चार...
महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल सिफारिस
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 19, 2021 0
काठमाडाैं । सरकारले महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडालकाे नाम सिफारिस गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामा बडालको नाम सिफारिस गरिएको हो । अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएका...
मुम्बई आईपीएलको फाइनलमा
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 6, 2020 0
युएइ । संयुक्त अरब इमिरेटमा सञ्चालन भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको १३ औं संस्करणमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इण्डियन्स फाइनलमा पुगेको छ ।...
भर्खरै Roshan Shrestha - April 29, 2020 0
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणबाट मङ्गलबार एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा बस्दैआउनुभएका महेश पन्थी रहेका...
पुलिस क्लबलाई काठमाडौं मेयर्स कपको उपाधि
Editor-Picks राजधानी संवाददाता - March 13, 2021 0
काठमाडौं । काठमाडौं मेयर्स कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शनिबार सम्पन्न फाइनलमा पुलिस क्लबले...
कोरोना भाइरसबाट चीनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २ हजार २०० भन्दा बढी पुग्यो
अन्तराष्ट्रिय Sushila Bishwokarma - February 21, 2020 0
बेइजिङ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चीनभरी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार २३६ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शुक्रबार जनाएका छन् । गत वर्षको अन्त्यमा चीनको...
११ हजार प्रतियोगीलाई पछि पार्दै राजविराजकी रक्षाले जितिन भारतिय पुरस्कार
कला Dhruba Lamsal - December 24, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । सामा—चकेवा उत्सवको अवसरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लाीमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय अनलाइन चित्रावली प्रतियोगितामा राजविराजकी रक्षा चौधरी द्वितिय स्थान हात पार्न सफल भएकी...
संक्रमितमध्ये ०.५५ प्रतिशतको मृत्यु
काठमाडौं । देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म २ सय ७ जनाको मृत्यु भएको छ । जुन कुल संक्रमितको ०.५५ प्रतिशत हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...
काठमाडौंसहित ठूला शहर विद्यालय एक महिना बन्द गर्न सुझाव
डा. देवीप्रसाद आचार्य - April 8, 2021
टरिगाउँ एयरपोर्टमा जडित टावर कन्सोलको नगर प्रमुख पाण्डेद्वारा उद्घाटन
ओपेन्द्र बस्नेत - April 10, 2021
सत्यन श्रेष्ठ - April 11, 2021